မြန်မာစာ ( Myanmar3) — MYSTERY ZILLION
မြန်မာစာ ( Myanmar3)
web ui ပိုင်းမှာ မြန်မာစာ ( Myanmar3) ပုံစံ ပေါ်တာ မမှန်ဘူးဖြစ်နေလို့ပါ.. ကူညီပေးကြပါဦးနော်
can you show the sample screen ? what browser ?
use mozilla firefox browser -
you didn't declare css font-family for myanmar 3
declare လုပ်ထားတာလဲ မပေါ်လို့ပါ
font-family: Arial, Verdana, Zawgyi-One, "Myanmar3","Courier New";
ဒီလို declare လုပ်ထားပါတယ်။ :-/
ဒီလိုပါ..မေဇွန်က အရင်ဆုံး excel file တွေကို csv ပြောင်းပြီး mysql db ထဲ import လုပ်ပါတယ်..
ပြီးမှ ajax ui ပေါ်မှာ data တွေ ပြန်ပြတာပါ...
css လည်း စောစောက ပြောသလို declare လုပ်ထားပါတယ်
(ပထမက declare လုပ်ထားတဲ့ ထဲမှာ myanmar3အတွက် မပါပါဘူး - ko saturn ပြောမှ ထည့်လိုက်တာပါ )
ဒါပေမဲ့ အဆင်မပြေသေးပါဘူး...အဲ့ဒါ ajax CRUD နဲ့များဆိုင်မလား..ဘယ်လိုကြောင့်လဲ မသိပါဘူး... #:-S
Your font-family is wrong. It should be like
font-family: "Myanmar3", Arial, Helvetica, sans-serif;
Sublime text2မှာ zawgyi font ပေါ်အောင်
// "font-family": "Zawgyi-One",
font-face ကို ပြင်ထားတာကို...မြန်မာစာ မပေါ်လို့ပါ
myanmar3 မှာ ၀လံုးကို တစ်ြခားနဲ့တွဲရင် အဆင် မ ေပြ ဖြစ်ေန လို့ရှင့် .. တ ခြားစာလံုးေတွလဲ ရိုက်ရင်း တစ်ခါတစ်ခါ အဲ'ဒီ ၀လံုးဆန်ဆန် အ၀ုိုင်းေလး ကြားထဲ ခံခံေနတာ ဘ,်လို လုပ်ရမလဲ ရှင် ေကျးဇူးပါ
အဲဒါ ဝလုံး မဟုတ်ပဲ သုည (၀) ကို ရိုက်နေလို့ပါ။ အခု လက်ရှိ ဘာ keyboard နဲ့ ရိုက်နေတာလဲ မသိဘူး ? keyboard ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ဘယ်နေရာက ဝလုံး ဆိုတာ ပြောလို့ ရမယ်။
Thanked by 1 eagertolearn
ကီးဘုတ်က မြန်မာ၃ကီးဘုတ်လို့ ပြာရမလား... ဒီက ေန ,ူထးတာပါ/
http://code.google.com/p/keymagic/downloads/list ... but i don't remember which one i installed. i do would like to use myanmar3.
Keyboard I am trying to use is this one...
I could type properly once. Then I cannot anymore. I don't know why. I amam not good at technology.
Can you please advise the proper steps I should take?
According to that layout, you should try as follow.
Myanmar Letter Wa (ဝ) = Shift + w
Myanmar Digit Zero (၀) = 0
မတွေ့လိုက်ဘူး။ အဲဒီဟာကို ... ရှမ်းတာ။ ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ ထပ်သိချင်တာက အသတ်.. ဟပ်ထိုး.. သဝေထိုး စ တာတွေမှာ ဘယ်ဟာကို အရင် ိရုက်ရမယ်ဆိုတာ ဘယ်မှာ ရှာရမလဲရှင့်
ခုတော့ ရိုက်ြကည့်ပြီး မှားရင် ဘက်စပေ့နဲ့ ခဏခဏပြန်သွားနေရလို့ .. တချောင်းငင်ပြီးမှ သဝေထိုးလား .. လံုးကြီးကို အက္ခရာမရိုက်ခင် အရင်ရိုက်ရမှာလား... အဲ့ဒီ.. အစဉ်လိုက် လာသင့်တဲ့ ဟာလေး ဘယ်မှာ ရှာဖတ်ရမလဲ ရှင်။
တကယ်ပဲ ခုတော့ ဒီစာရိုက်တာ ၁၀မိနစ်လောက်ြကာနေတယ်.. ရိုက်လိုက် ဘက်စပေ့နဲ့ ဖျက်လိုက် ပြန်ရိုက်ြကည့်လိုက်နဲ့လေ... ကြာရင်တော့ ရသွားမယ် ထင်ပါတယ်...
မူလတန်းကျောင်းမှာ မြန်မာစာသင်ခဲ့သလို စာလုံးပေါင်းပြီး စာကိုရိုက်ရင်ရပါတယ်။
ကျောင်း = ​ေ + က + ျ +ာ+ င +်+ း
ဉပမာ... သဝေထိုး ဆို မရဘူး ဖြစ်တယ်လေ.. အက္ခရာကို ရေးပြီးမှ သူ့ကိုရေးနေရတယ်.. အဲဒီလိုပါ..
Something is not right, please check your keyboard installation. Unicode keyboards should not be like that. They just need to type as you are writing.
@eagertolearn , keyboard မှားနေတာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
keymagic သုံးတယ်ဆိုရင် လက်ရှိ ဘာ keyboard သုံးလဲဆိုတာကို ပြန်စစ်ဖို့လိုမယ်။
keymagic မှာက မြန်မာ ၃ အစား မြန်စံ ကို ပြောင်းထားတယ်။ တကယ်လို့ keymagic မသုံးဘူးဆိုရင် မြန်စံ keyboard ကို ပြောင်းသုံးကြည့်ပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ keymagic က Zawgyi-Unicode ကိုပဲ သုံးတယ်။ ဇော်ဂျီ လက်ကွက်နဲ့ unicode ကို ရိုက်လို့ရပါတယ်။
First of all, let me say that I do not have knowledge about these font things.
And also guys, if my posts are bothering you, I didn't mean to be like this but just I am so dumb to understand these things.
The story behind is -
First I used to type in Zawgyi.
Then, my job needs me to use "Myanmar3" (but I am not familiar with the Myanmar3 လက်ကွက်). - So, one of the coworkers advised me to download that keymagic to use Zawgyi လက်ကွက် but actually I am typing in Myanmar3. So it's kind of I am using Zawgyi လက်ကွက် but typing Myanmar3.
After awhile I do like Myanmar3 and I am trying to get used to it.
My question here again is - is that MyanSan the same to Myanmar3? (please don't think me I am so dumb..or it's ok you can think ) If I use that MyanSan, my office may notice I am not using Myanmar3?
Myanmar3ဆိုတာက unicode font ပါ။
မြန်စံ က keyboard ပါ။ မြန်စံ နဲ့ ရိုက်ရိုက် keymagic နဲ့ ရိုက်ရိုက် မြန်မာ ၃ font ပဲ ပေါ်ပါတယ်။
Font ဆိုတာကတော့ စာလုံး ပုံဖော် တာဖြစ်ပြီးတော့ keyboard ကတော့ ဘာ ခလုတ်နှိပ်ရင် ဘာ စာပေါ်ဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ Unicode Font တစ်ခုကို ရိုက်တဲ့ unicode keyboard နဲ့ ရိုက်လို့ရပါတယ်။
keymagic က Zawgyi Unicode keyboard သုံးထားမှသာ မြန်မာ ၃ ကို ရိုက်လို့ရပါမယ်။
တကယ်လို့ keymagic က Zawgyi Keyboard သုံးထားရင် မြန်မာ ၃ ရိုက်ရင် အမှန် ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
keymagic သုံးထားတယ်ဆိုရင် keymagic ရဲ့ လက်ရှိ keyboard က ဇော်ဂျီ ဖြစ်နေလား စစ်ကြည့်ပါ။
မြန်စံ သုံးပြီး မြန်မာ ၃ ကို ရိုက်လို့ရပါတယ်။
Thank you very much. Let me try... Appreciatealot.
"keymagic က Zawgyi Unicode keyboard သုံးထားမှသာ မြန်မာ ၃ ကို ရိုက်လို့ရပါမယ်။"
စိတ်မရှိပါနဲ့နော်.. ဒီလင့်က ဘယ်တစ်ခုကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ရလဲ ပြောပြပေးလို့ ရမလားနော်... မှားပြီး သံုးထားမိတယ်ထင်လို့.. အမှန်လဲ မသိလို့ ပါ။
Sublime မှာ font-family:"Myanmar3" ဆိုပြီးသုံးတာ Microsoft Edge မှာ ဆိုရင် font မှန်ပြီး Opera, Chrome, Mozilla မှာ ​ေ နဲ့ျ ပါရင် မမှန်တော့ဘူး။ ပြောပြပေးလို့ရမလား။မြန်မာfont နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိပ်မသိလို့ပါ
Sublime မှာ Myanmar Unicode သုံးမရပါ။
Rendering ကြောင့် ဖြစ်ပါမယ်။ ဘယ် Unicode version သုံးပါသလဲ ? ပြည်ထောင်စု font ကို ပြောင်းသုံးကြည့်ပါ။ မမှန်တော့တာက ကိုယ့် website မှာ ဖြစ်တာလဲ ဒါမှမဟုတ် ကြည့်နေသည့် website မှာ ဖြစ်တာလား ?
myanmar3 ကို keyman 6.2 နဲ့ရိုက်ထားတာ Microsoft word 2010 နဲ့ရိုက်တာ save ပြီးပြန်ဖွင့်ရင် Myanmar2ဆိုပြီးပြောင်းသွားတာ ဘယ်လိုလုပ်ရင်ရမလဲ